ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG « MMWeather Information BLOG
« ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ထပ်မံဦးတည်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ် »
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ 19AUG
By mmweather.ygn, on August 19th, 2012
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W မှ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်း TEMBIN(15W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် IGME ဖြစ်လာပါသည်။
သြဂုတ်လ- ၂၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန်ျေန့လည် ၁၂၃၀ နာရီ မတိုင်မီ(၇၂ နာရီအတွင်း) အပူပိုင်းမုန်တိုင်း TEMBIN သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကာ ထိုင်ဝမ်းကျွန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ဘ်ွရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
96W – TEMBIN(15W – FIFTEEN)
19 Aug 2012 0000Z
Location: 17.7 124.6
TEMBIN (IGME) is expected to continue drifting southward during the next 12 hours…and will reverse track northward through the next 36 hours. By 48 to 72 hours, TEMBIN will start turning NW to WNW-ward. On the forecast track, the core of TEMBIN will not directly affect any part of the Philippines as it will remain over the open sea through Tuesday…withapath towards Eastern Taiwan.
MONDAY NOON: Reaches Tropical Storm strength as it starts to turn Northward while near the coast of Cagayan…239 km ESE of Santa Ana [12NN AUG 20: 18.0N 124.4E @ 85kph].
TUESDAY NOON: Accelerating northward away from the coast of Cagayan…about 269 km ESE of Basco, Batanes [12NN AUG 21: 19.9N 124.5E @ 100kph].
WEDNESDAY NOON: Start turning NW across the North Philippine Sea, away from Extreme Northern Luzon towards Eastern Taiwan…about 257 km SE of Hualien City, Taiwan [12NN AUG 22: 22.6N 123.6E @ 110kph]. လေဖိအားနည်းဆဲလ် 97 W
ဂူအမ်ကျွန်းအနောက်ဘက် မိုင် ၂၀၀ ခန့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 97W သည် ပိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ခြေ အဆင့် MEDIUM သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ လတ်တလော ရွေ့လျားမှု အခြေအနေမှာ မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၈ မိုင်နန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
97W – MEDIUM
Location: 14.0 141.8
ဂူအမ်ကျွန်း အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၆၃၀ ခန့်၊ ဆိုင်ဖန်ကျွန်း အရှေ့မြောက်ဘက် ၅၁၀ မိုင် ခန့်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်း 98W သည်လည်း ပိုမိုအားကေင်းလာနေပြီး မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ခြေ အဆင့် MEDIUM သို့ ရောက်ရှိလာကာ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၂၄ မိုင်နှုန်း ခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
98W – MEDIUM
Location: 18.5 152.8
Uncategorized « ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ထပ်မံဦးတည်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ် »
« ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းသို့ ထပ်မံဦးတည်လာသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးများ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KAI-TAK ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum